Cabi Axmed oo sheegay in Tigreegu hadda baxsad yihiin lagana eryay Kasagita - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Raiisal wasaaraha Itoobiya oo hadda si toosa u korjoogteynaya dagaalka ciidanku uga sifaynayo Tigreega deegaanada Axmaarada iyo Canfarta ayaa sheegay in hadda laga eryaday deegaanka Kasagita ee Canfarta.
”Waxa ciidanku dib u xoreeyay deegaanka Kasagita ee Canfarta ayuu Cabi Axmed la wadaagay shacabka Itoobiya. Cabi Axmed ayaa lagu canaantey inuu wax badan hagranayo oo hadda ayna harin wax la hagrado ayadoo loo jeedo sida reer galbeedku dabada uga wato Tigreega.
Sidii Cabi Axmed u soo aaday aaga dagaalka waxa baxsad bilaabay falaagada Tigreega oo adeegsanaya shacab iyo haween aan qaan gaadhin. Xitaa ma haystaan meel Tigreegu ay dhaawaca ku daawaystaan ayuu yiri Xirsi Warfaa waana isdil.
Waxa maalmo dhow la arki doonaa ciidanka oo dhamaan dib ula wareegay deegaanada Axmaarada iyo kuwa Canfarta dibna u galay Maqale. ”Waxa hadda ciidanku ku socdaa Jofra iyo Burka oo ka tirsan deegaanada Canfarta ayuu yiri Cabi Axmed. Uma babac dhigi karaan ciidanka qaranka ayuu raaciyay.